ထူသောကြေးနီ PCB2layers 3oz copper board, အပြာရောင်ဂဟေဆက် HASL မျက်နှာပြ�ကြေးနီဘုတ်အဖွဲ့ 3oz အလွှာCB ရှေ့ပြေးပုံစံကိုတှနျးလှနျ - တရုတ်ထူထပ်သောကြေးနီ PCB2layers 3oz copper board, အပြာရောင်ဂဟေဆက် HASL မျက်နှာပြင် finish ကို PCB ရှေ့ပြေးပုံစံပေးသွင်းခုခံတွန်းလှန်,စက်ရုံ -WMD
ထူသောကြေးနီ PCB2ကြေးနီဘုတ်အဖွဲ့ 3oz အလွှာ, အပြာရောင်ဂဟေဆက် HASL မျက်နှာပြင် finish ကို PCB ရှေ့ပြေးပုံစံကိုတှနျးလှနျ
လေဟာနယ် အထုပ်,20PC များ / အိတ်
62.74*73.66မီလီမီတာ / 1up
2 အလွှာ 3oz ကြေးနီ
ထူသောကြေးနီ PCB, PCB ပရိသ, high-တိကျစွာ PCB,2အလွှာ FR4 PCB, ရှင်းလင်းသောဘုတ်အဖွဲ့. base ပစ္စည်း FR4 Tg140 ဖြစ်ပါသည်. 1.6မီလီမီတာ±0.13မီလီမီတာဘုတ်အဖွဲ့အထူ. HASL Surface ကကုသမှု. နည်းပညာဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များချောကြေးနီ 3oz ထူကြေးနီဖြစ်ပါသည်. double-တဖက်သတ်ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ် WMD'S လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်တစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာရှယ်ယာဖွံ့ဖြိုးသောပေါ်တွင်ထုတ်ကုန်များမှာ. ပုံမှန်အားဖြင့်သေးငယ်တဲ့စီးရီးကိုအပ်ကြသည်5ရက်ပေါင်းနှင့် 8-9days အတွက်ပျမ်းမျှအားဘဏ်ဍာ, အဆိုပါဆားကစ်မျက်နှာပြင်ချောအမျိုးမျိုးတို့ကိုရှိနိုင်ပါသည်, ရိုးရာ HAL ကနေနီကယ်ဖို့ / ရှေ, မလှုပ်မရှားနေသော, Silver, etc.Normally သူတို့ FR4 ဖိုက်ဘာမှန်နှင့်အတူထားကြပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်း CEM သို့မဟုတ် Teflon တူသောပိုပြီးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသူတွေကိုတူသောစျေးနှုန်းချိုသာသောပစ္စည်းများသုံးနိုငျ.
ထူသောကြေးနီ PCB 4oz ကြေးနီ FR4 TG170 ပစ္စည်း Gerber သို့မဟုတ် ODB LF HASL Hot-Air ကိုဂဟေဆက် level IPC Class ကို II ကိုစံနှစ်ဦးအလွှာဘုတ်အဖွဲ့
4 အလွှာ 1.6mm Flex ကိုတင်းကျပ် immersive ရွှေ PCB ဘုတ်အဖွဲ့ Printed Wired ဘုတ်အဖွဲ့
အပြည့်အဝ turnkey စည်းဝေးပွဲကိုဝန်ဆောင်မှုလျင်မြန်စွာ-အလှည့် PCBA ရှေ့ပြေးပုံစံ BOM နှင့်တရုတ်နိုင်ငံ Printed Circuit ဘုတ်အဖွဲ့ထဲမှာရှန်ကျန်း PCBA ထုတ်လုပ်သူအတွက် SMD ပုံဆွဲ PCBA ထုတ်လုပ်သူ & အစည်းအဝေး
ပုံနှိပ်ဆားကစ်, ပုံနှိပ်ဝါယာကြိုး, ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့, ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ် (PCB), ပုံနှိပ်ဝါယာကြိုးဘုတ်အဖွဲ့(PWB), တင်းကျပ်ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့, ဆယ်ပါးအလွှာဘုတ်အဖွဲ့, တောင့်တင်းသော 10 အလွှာပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့. ရွှေလက်ချောင်း, ဘီဗဲလ် / Cham